Fadintseranana – Andiany Faneva: andrasana hiady amin’ny kolikoly | NewsMada
Fadintseranana – Andiany Faneva: andrasana hiady amin’ny kolikoly
Navoaka ny 9 aogositra teo teny amin’ny CCI Ivato ny andiany Faneva mpanara-maso ao amin’ny ladoany (Inspecteurs des douanes). Niainga avy amin’ny fifaninanana mivantana sy ho an’ireo am-perinasa, nakàna ireo mpiofana. Nisoratra anarana tany am-boalohany, 1887 ho mpifaninana mivantana, 60 tamin’ireo am-perinasa ; voaray tamin’ny fifantenana, 1302 , sy 45 ; afaka tamin’ny adina an-tsoratra, mivantana 31, am-perinasa valo. Afaka tanteraka 30 : 24 ireo mpifaninana mivantana, enina am-perinasa. Amin’ireo 30 ireo, 15 avy ny lahy sy vavy. Nanomboka ny 4 febroary 2018 ny fanofanana azy ireo, nifarana ny 31 jolay 2019, naharitra 18 volana, ka iray volana nandalovana tany amin’ny Sekoly ambony zandarimaria any Moramanga.
Tanjon’ny fadintseranana ny hampivoatra ny asany, nanomboka tamin’ny fomba fandraisana ireo mpanara-maso ireo, ka hanamafisana sy hanatsarana ny fitantanana, araka ny fenitra napetraky ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny ladoany. Andrasana mba ho izay tokoa ny ao amin’ny fadintseranana, indrindra fa ny ataon’ireto mpanara-maso ireto hiady amin’ny kolikoly.
Taranja maro ny nampiofanana azy ireo, anisan’izany ny sata ankapobeny mifehy ny asam-panjakana sy ny fadintseranana, momba ny asan’ny fadintseranana. Lalàna momba ny fadintseranana sy ny hetra mifanaraka amin’izany, dingana arahina amin’ny famoahana entana. Fanaraha-maso : fisavana, fanaovana fanadihadiana, fidinana any amin’ny orinasa. Fanampin’ireo taranja fototra ireo : fianarana informatika, tenim-pirenena anglisy sy frantsay, fiarovana ny seranam-piaramanidina sy ny seranan-tsambo, fomba fanao momba ny arofenitra sy ny fandraisan’olona…
Ny fampiasana fivoaran’ny teknolojia amin’izao fotoana izao akory tsy midika “tsy fanomezana hasina ny maha olona”. Manome lanja manokana izay lafiny maha olona izay ny ao amin’ny fadintseranana, hampisy kalitao ny asa. Nanatrika ny fotoana teny Ivato, ny Praiminisitra, Ntsay Christian.